သမ္မာကျမ်းစာ၏သင်းထောက်များ | Real Conversion
တရားဒေသနာတော်ကို လော့စ်အိန်ဂျယ်လ်ရှိ Baptist Tabernacle အသင်းတော်၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၀) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏ နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဝါရင့်သင်းအုပ်ဆရာ Dr. R. L. Hymers, Jr. က
Lord’s Day Afternoon, January 10, 2021
(၁၈၂၂-၁၈၉၄ခုနှစ် ဝီလျှံ ဒီ. လောင်စတက် သီကုံးသော) သန့်ရှင်းရန်အချိန်ယူကျူး ဓမ္မ သီချင်းကို တရားဒေသနာတော်မတိုင်မီ သီဆိုသည်။
ဒီမနက်မှာ ဘုရားသခင်ဘာပြောလဲဆိုတာ ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။ တမန်တော် ၆း ၁-၇ သို့ သွားကြပါစို့။
“ထိုကာလ၌ တပည့်တော်တို့သည် များပြားသည် ရှိသော်၊ နေ့ရက် အစဉ်အတိုင်း လုပ်ကျွေးသောအခါ၊ ဟေလေနစ်အမျိုး မုတ်ဆိုးမတို့ကို မလုပ်မကျွေးဟု ထိုအမျိုးသားတို့သည် မြည်တမ်း၍ ဟေဗြဲလူတို့ကို အပြစ် တင်ကြ၏။ ထိုအခါတကျိပ်နှစ်ပါးသော တမန်တော်တို့သည် တပည့်တော် အပေါင်းတို့ကို ခေါ်ပြီးလျှင်၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုထား၍ စားပွဲ၌လုပ်ကျွေးမှုကိုမှုကို မဆောင်သင့်။ ထိုကြောင့် ညီ အစ်ကိုတို့၊ ဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်း၊ ပညာနှင့်၎င်းပြည့်စုံလျက်၊ အသရေရှိသော လူခုနစ်ယောက်တို့ကို သင်တို့တွင် ရှာကြလော့။ ဤအမှု ကို ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါ ထိုသူတို့ကို ငါတို့သည် ခန့်ထားကြမည်။ ငါတို့မူကား၊ ဆုတောင်းပဌနာပြခြင်း၊ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို ဟောပြောခြင်းအမှုတို့ကို အမြဲ ပြု၍ နေမည်ဟုဆိုကြ၏။ ထိုစကားကို လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည် နှစ်သက်ကြသဖြင့်၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်၎င်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် နှင့်၎င်း ပြည့်စုံသော သတေဖန်မှစ၍ ဖိလိပ္ပု၊ ပြောခေါ်၊ နိကနော်၊ တိမုန်၊ ပါမေန၊ ယုဒဘာသာဝင်သော အန္တိအုတ်မြို့သား နိကောလတို့ကို ရွေးကောက်၍၊ တမန်တော်တို့ရှေ့၌ထားကြ၏။ တမန်တော်တို့သည်လည်း ဆုတောင်းပြီးလျှင် ထိုသူတို့၏ခေါင်းပေါ်၌ လက်ကိုတင်ကြ၏။ ဘုရားသခင်၏ သာသနာတော်သည် တိုးပွား သဖြင့် ယေရုရှလင်မြို့၌ တပည့်တော်တို့သည် အလွန်ပွါးများ၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် အပေါင်းတို့သည် ယုံကြည်ခြင်း တရားကို နားထောင်ကြ၏။” (တမန်တော် ၆း ၁-၇)
Los Angeles ရှိ ပထမတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၌ ကျွန်ုပ်၏နှစ်ရှည် သင်းအုပ်ဆရာ ဒေါက်တာ တိမောသေလင်း သည် သင်းထောက်အားလုံးကို အောက်ပါလိုအပ်ချက် (၁၀) ခုကို လေးစားလိုက်နာရန် ကတိပြုရန် တောင်းဆိုခဲ့သည် -
“အသင်းတော်၌သင်းထောက်များအတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် (၁၀)ချက်”
(1) ခရစ်တော်နှင့်သူတစ်ပါးအစေခံရန် ဆန္ဒရှိရမည်။
(2) ၁တိ ၃း၁-၁၀ တွင် ဖော်ပြသည့် အချက်တွေကို နာလိုက်ကျင့်သုံးရမည်။
(3) နေ့စဉ်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ ပုံမှန်ဆယ်ဘို့တဘို့ပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရမည်။
(4) သင်းထောက်ဖြစ်သော မိမိခင်ပွန်းယောကျာ်းကို ကူညီရန်ဆန္ဒရှိသည့် အမျိုးသမီးကို လက်ထပ်ရမည်။
(5) ဆန်းဒေးစကူးကို သင်ကြားပေးနိုင်ရမည်။
(6) အိမ်လှည့်သွားခြင်း၌သော်၎င်း ပါဝင်ရမည်။
(7) အသင်းတော်၌ အစည်းအဝေး၊ ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၊ ဆုတောင်းအစီအစဉ်၊ အမှုဆောင်များ အစည်း အဝေးများ၊ စီးပွားရေးဆွေးနွေးခြင်းများနှင့် အသင်းတော်မှလုပ်ငန်းစဉ်အငန်းအတာများ တက်ရောက်ပါ ဝင်ရမည်။
(8) အသင်းတော်၌ သင်တန်းပေးခြင်းများတွင် ပါဝင်ရမည်။
(9) လူငယ်ခရစ်ယာန်များရှေ့၌ ပုံဥပမာကောင်းတခုအနေဖြင့် ရပ်တည်ရမည်။ ဘယ်တော့မှသူတို့နှင့်ငြင်း ခုန်ခြင်း (သို့မဟုတ်) သင်ကြားပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ သူတို့နှင့်အမျက်မထွက် ပါနှင့်။
(10) သင်းထောက်များသည် သင်းအုပ်ဆရာများနှင့် အလုပ်လုပ်ရမည်။
(ဒေါက်တာ တိမောသေလင်း၊ အသင်းတော်ကြီးထွားမှု လျို့ဝှက်ချက်၊ pp. ၄၅၊၄၆)
ဒေါက်တာလင်းပြောတာမှန်ပါတယ်။ သူပြောတဲ့အတိုင်းသာ သင်းထောက်များလိုက်နာမယ်ဆိုရင် အသင်းတော်ခွဲထွက် ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်လို (Independent) ကိုယ်ထူကိုယ်ထရပ်တည်တဲ့ အသင်းတော်များထဲက သင်းထောက်တွေက အသင်းတော်ကွဲထွက်မှု ဖြစ်စေတတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာ ၉၂ရာခိုင်နှုန်း ရှိတဲ့ သင်းထောက်တွေက အသင်းတော်ခွဲထွက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှာလည်း ၉၃ ရာခိုင်နှုန်း သင်းထောက်တွေက အသင်းတော်ခွဲထွက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာတွေက Dr. Roy L. Branson ရဲ့ အသင်းတော်ခွဲ ထွက်ခြင်းစာအုပ်ထဲကနေ ကောက်နှုတ်ထားပါတယ်။ Dr. W. A. Criswell က အဲဒီစာအုပ်နှင့်ပါတ်သတ်ပြီးတော့ ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်၊
သင် ဒီနှစ်မှာ တခြားစာအုပ်များ မဖတ်ခဲ့ရင်တောင်၊ အသင်းတော်ခွဲထွက်ခြင်း စာအုပ်ကိုတော့ဖတ်ပါ။ အဲဒီစာအုပ်က သင်းအုပ်ဆရာများအတွက် ဖတ်ရမယ့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပါ။
– Dr. W. A. Criswell,
Dallas, Texas မှ
Tennessee Temple ကောလိပ်ရဲ့ chancellor ဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Dr. Lee Roberson ကလည်း အဲဒီစာအုပ်နှင့် ပါတ်သတ်ပြီးတော့ ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်၊
သင်းအုပ်ဆရာများနှင့် ခေါင်းဆောင်များက အဲဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ အကျိုး အမြတ်ရပါလိမ့်မယ်။
Dr. Branson က “သင်းထောက်အများက အန္တာရယ်ရှိကြပါတယ်၊ အကြောင်းမှာ သူတို့က သူတို့ဉာဏ် ရည်မပြည့်မီခဲ့တဲ့ အလုပ်တခုကို လုပ်နေကြလို့ပါပဲ” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ (ဘရန်ဆန်၊ ပီ. ၅၁)
အနာဂတ်မှာ ခွဲထွက်ခြင်းနှင့်ပါတ်သတ်ပြီး ဘယ်လိုရှောင်မလဲ? Dr. Branson က “ငါတို့ ပထမနိယာမကို သွားရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက၊
a.	သူတို့လုပ်ဆေင်ချက်က တရားဟောခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ သင်ကြားခြင်းနှင့် ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း များဖြစ်ပါတယ်။
b.	သူတို့ကို သင်းအုပ်တွေက ဦးဆောင်လွမ်းမိုးပါတယ်။
“ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို သင်တို့အားဟောပြော၍၊ သင်တို့ကို အုပ်သောသူတို့ကို အောက်မေ့ကြလော့။ သူတို့သည် အဘယ်သို့ကျင့်ကြံပြုမူ၍ စုတေ့ သည်ကို စေ့စေ့ဆင်ခြင်လျက်၊ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို မှီအောင်လိုက်ကြ လော့။” (ဟေဗြဲ ၁၃း၇)
“သင်တို့ကို အုပ်သောသူတို့၏ စကားကိုနားထောင်၍နှိမ့်ချလျက်နေကြလော့၊ သူတို့သည် ကိုယ်တိုင် စစ်ကြောခြင်းကိုခံရသောသူကဲ့သို့၊ သင်တို့ စိတ်ဝိညာဉ်၏အကျိုးအလိုငှါ စောင့်နေ
ကြကုန်၏။ သင်တို့အကျိုးကို မဖြစ်စေတတ်သော ဝမ်းနည်းခြင်းမရှိ၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၍၊ သူတို့ သည် စစ်ကြောခြင်းကို ခံရမည်အကြောင်း သတိပြုလျက်နေကြလော့။” (ဟေဗြဲ ၁၃း၁၇)
c.	ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် သူတို့ကိုသင်ကြားခြင်းက သင်းထောက်များရဲ့စိတ် အားထက်သန်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။
d.	အားလုံးကို ရိုးရှင်းအောင်လုပ်ပါ!
ဟောပြောခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ဧဝံဂေလိတရားမှလွဲပြီး အရာအားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်ပါ။
၁။ လစဉ်စီးပွားရေးအစည်းအဝေးများ ဖယ်ရှားပါ
၂။ သင်းထောက် အစည်းအဝေးများ ဖယ်ရှားပစ်ပါ။
၃။ စရှိသဖြင့်။ (pp. 228, 229, 230 ဘရန်ဆန်).
၄။ စီးပွားရေးအစည်းအဝေးများ၊ ဘုတ်အဖွဲ့များနှင့်ကောင်စီများအားလုံးကို ဖယ်ရှားပါ။
Dr. Branson က ဒီလိုပြောတယ်၊ “သမ္မာကျမ်းစာထဲက တစ်ခုတည်းသော 'စီးပွားရေးအစည်း အဝေးများ' ဆိုတာ သင်းအုပ်ဆရာများ/ပရောဖက်များက လူတို့ကိုစုရုံးပြီးတော့ အနာဂတ်မှာ လုပ်ဆောင်မယ့်အကြောင်း ပြောဆိုကာ၊ လူတွေက “ကောင်းတယ်၊ ငါတို့လုပ်ဆောင်မယ်” လို့ အတူတူတကွ ထောက်ခံအားပေးသောအရာကို ခေါ်ပါတယ်။
Dr. Branson က “သင်းထောက်အများစုဟာ အန္တာရယ်ရှိကြပါတယ်၊ အကြောင်းမှာ သူတို့ ဉာဏ်ရည် မပြည့်မီခဲ့တဲ့ အလုပ်တခုကို သူတို့လုပ်နေကြလို့ပါပဲ” လို့ပြောပါတယ်။ (p. ၅၁)
သင်းထောက်များဟာ အာဏာပိုင် ဘုတ်အဖွဲ့များမဟုတ်ပါ၊ အသင်းတော်အပေါ်အုပ်စိုးမှုပိုင်း ဆိုင်ရာကို သင်းအုပ်ဆရာအပေါ်ပေးထားပြီး သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်နိုင်တဲ့အခွင့် အာဏာကို သင်းထောက်များကို မပေးထားပါ။ ဘုရားက၊
“သင်တို့ကို အုပ်သောသူတို့၏စကားကို နားထောင်၍ နှိမ့်ချလျက်နေကြလော့၊ သူတို့သည် ကိုယ် တိုင် စစ်ကြောခြင်းကိုခံရသောသူကဲ့သို့၊ သင်တို့ စိတ်ဝိညာဉ်၏ အကျိုးအလိုငှါစောင့်နေကြကုန် ၏။ သင်တို့အကျိုးကို မဖြစ်စေတတ်သောဝမ်းနည်းခြင်းမရှိ၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၍၊ သူတို့သည် စစ်ကြောခြင်းကို ခံရမည်အကြောင်း သတိပြုလျက်နေကြလော့။” (ဟေဗြဲ ၁၃း၁၇)
သင်းထောက်တစ်ယောက်က “သင်းထောက်များအနေနဲ့ ဘာလုပ်သင့်တယ် သင်ထင်လဲ” ဟု မေး ခဲ့တယ်။
သင်းအုပ်ဆရာက တမန်တော် ၆း၁-၆ကို လှန်ပြီး “တိကျတဲ့အလုပ်ကို သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ပေးထားတယ်၊” သင်းထောက်က “အဲဒီအရာထက် ကျမ်းစာထဲမှာ အခွင့်အာဏာတရပ်လုံး ကို သင်းထောက်အပေါ်ပေးထားတယ်!” လို့ ပြောခဲ့တယ်။
နောက်ပြီး သူက “ကျမ်းစာထဲမှာ အခွင့်အာဏာတရပ်လုံးကို သင်းထောက်အပေါ်ပေးထား တယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်”လို့ ပြန်ပြောခဲ့တယ်။
သင်းအုပ်က “ခင်ဗျားပြောတာက ငါတို့နောက်ဆုံးကြားတဲ့အရာပဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျမ်းစာထဲမှာ ရှာတွေ့လို့မရတဲ့အရာမို့လို့ပါ။”
သင်းထောက်များဟာ အသင်းတော်ထဲမှာ သင်းအုပ်များကို ဘာလုပ်ရမယ်၊ မလုပ်ရကို စီမံဖို့ခန့်ထားတာ မဟုတ်ပါ၊ ဒါကြောင့်လည်း ဒီအချိန်မှာ သင်းအုပ်ဆရာတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်က လူသုံးဦးအား သင်းထောက်များအဖြစ် တစ်နှစ်ခန့် ခန့်ခန့်အပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေက Mr. Mencia၊ Mr. Ngann နှင့် John Wesley Hymers တို့ဖြစ်ပြီး အသင်းတော်မှာ သင်းထောက်အဖြစ် တစ်နှစ်တာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်။ Dr. Cagan က နှစ်နှစ်တာဝန် ထမ်းဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလတိုင်း အစည်းအဝေးရှိမှာဖြစ်ပြီး၊ အကယ်၍ ကျွန်တော်ကသင့်လျော်တယ်လို့ယူဆရင် သင်းထောက် များကို နောက်ထပ်တစ်နှစ်ခန့် ပြန်လည်ခန့်အပ်ပါမယ်။
အခု အဖွင့်ကျမ်းပိုဒ်ကို နောက်တကြိမ်ဖတ်လိုပါတယ်။ တမန်တော် ၆း၁-၇ ကို လှန်ထားကြပါ။
“ထိုကာလ၌ တပည့်တော်တို့သည် များပြားသည်ရှိသော်၊ နေ့ရက်အစဉ်အတိုင်း လုပ်ကျွေးသောအခါ၊ ဟေလေ နစ်အမျိုးမုတ်ဆိုးမတို့ကို မလုပ်မကျွေးဟု ထိုအမျိုးသားတို့သည် မြည်တမ်း၍ ဟေဗြဲလူတို့ကို အပြစ်တင်ကြ၏။ ထိုအခါတကျိပ်နှစ်ပါးသော တမန်တော်တို့သည် တပည့်တော်အပေါင်းတို့ကို ခေါ်ပြီးလျှင်၊ ငါတို့သည် ဘုရား သခင်၏ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုထား၍ စားပွဲ၌လုပ်ကျွေးမှုကိုမှုကို မဆောင်သင့်။ ထိုကြောင့် ညီအစ်ကိုတို့၊ ဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်း၊ ပညာနှင့်၎င်းပြည့်စုံလျက်၊ အသရေရှိသောလူခုနစ်ယောက်တို့ကို သင်တို့တွင် ရှာကြလော့။ ဤအမှုကို ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါ ထိုသူတို့ကို ငါတို့သည်ခန့်ထားကြမည်။ ငါတို့မူကား၊ ဆုတောင်းပဌနာပြခြင်း၊ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို ဟောပြောခြင်းအမှုတို့ကို အမြဲပြု၍ နေမည်ဟုဆိုကြ၏။ ထိုစကားကို လူအစုအဝေး အပေါင်းတို့သည် နှစ်သက်ကြသဖြင့်၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်၎င်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်း ပြည့်စုံသော သတေဖန်မှစ၍ ဖိလိပ္ပု၊ ပြောခေါ်၊ နိကနော်၊ တိမုန်၊ ပါမေန၊ ယုဒဘာသာဝင်သောအန္တိ အုတ်မြို့သား နိကောလ တို့ကို ရွေးကောက်၍၊ တမန်တော်တို့ရှေ့၌ ထားကြ၏။ တမန်တော်တို့သည်လည်း ဆုတောင်းပြီးလျှင် ထိုသူတို့ ၏ခေါင်းပေါ်၌လက်ကိုတင်ကြ၏။ ဘုရားသခင်၏ သာသနာတော်သည် တိုးပွားသဖြင့် ယေရုရှလင်မြို့၌ တပည့် တော်တို့သည် အလွန်ပွါးများ၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အပေါင်းတို့သည် ယုံကြည်ခြင်း တရားကိုနားထောင်ကြ၏။” (တမန်တော် ၆း ၁-၇)
ဘုရားသားသမီး မိတ်ဆွေဖြစ်၊ အားငယ်သူကူမ၊
သန့်ရှင်းရန်အချိန်ယူ၊ ကမ္ဘာကြီး ယိုယွင်းပျက်စီး၊
ယေရှုနှင့်သာ အချိန်ယူ ကုန်ဆုံးပါ။
သင်အကျင့်၌ မိတ်ဆွေများ ကိုယ်တော် ပုံသဏ္ဌာန်မြင်။
သူ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက် အတွေးကြံစည် တစ်ခုစီ။
မေတ္တာစမ်းရေတွင်းသို့ ၀ိညာဉ်တော် ဦးဆောင်၊
သင်သည် အထက်ကောင်းကင် အကျိုးဆောင်လိမ့်မည်။
(၁၈၂၂-၁၈၉၄ခုနှစ် ဝီလျှံ ဒီ. လောင်စတက်သီကုံးသောသန့်ရှင်းရန် အချိန်ယူကျူး၊ ကဗျာ ပိုဒ် ၁၊ ၂ နှင့် ၄)